Ihowuliseyili yokucheba umda wabona uMenzi kunye noMthengisi | Ukudibanisa
Lo matshini usebenzisa i-Nokia servo motor, inkqubo yolawulo oluzenzekelayo ye-PLC. Ukubaleka kugudile kakhulu kwaye kuyasebenza kwaye kuphezulu kugqityiwe. Isetyenziselwa ukusika imiphetho yazo zonke iintlobo zeebhodi ezinje nge-HPL, ibhodi ye-foam ye-PVC, iplywood kunye ne-mdf kunye nezinye iibhodi zeenkuni.
Ubungakanani obuqhelekileyo bokusika ixesha elide: 915-1220mm (uhlengahlengiso), ukusika okunqamlezileyo ngo-1830-2440mm (uhlengahlengiso) .Obunye ubungakanani obulungelelanisiweyo bulungile ukubhukisha.
Ukuchaneka okuzenzekelayo okuphezulu kokucheba umda kusetyenziswa ukusika komphetho weplywood kunye nezinye iibhodi zomthi kukutsiba okukhulu ukusika ngokusika ngesandla ukusika okuzenzekelayo. Xa kuthelekiswa nesandla esiqhelekileyo sokutyhala isarha, lo matshini uneempawu ezintlanu: ukuchaneka okuphezulu, ukonga amandla, ukonga abasebenzi kunye nokusingqongileyo ukukhusela.Umatshini wamkela uyilo olukrelekrele lwe-CNC, isarha yesarha inokuhlengahlengisa ngokuzenzekelayo isantya ngokwemeko yokusika, ngaba ungayimisi isarha blade, kwaye uqaphele ukuzenzekelayo kokuqokelela kunye nokususa izinto ezilahliweyo.
ukusebenza okukhuselekileyo nokufanelekileyo, ukusebenza okuzinzileyo, ingxolo ephantsi zizinto ezilungileyo. Ubungakanani bokusika okuzenzekelayo buphezulu, udini lwebhodi emva kokunqunyulwa kuya kuba mpuluswa, kungabikho mda, kwaye ubungakanani bezinto ezigqityiweyo busemgangathweni.Ukusebenza kwemveliso kuphuculwe kakhulu, kwaye izibonelelo zayo ezibanzi zinokuqwalaselwa.
1. Isakhiwo esiphambili somelele ngokuqina ngokwaneleyo kunye nozinzo oluphezulu.
2. Inesixhobo sangaphambi kokulayisha, amandla emveliso kunye nokusebenza kakuhle kuphezulu: ukusebenza ngokutshintsha enye kunokuvelisa i-4000-5000 (18mm).
3. Esi sarha sinokuchaneka okuphezulu kokulwa nokunxiba isikhokelo sikaloliwe, ukusika ngokuchanekileyo okuphezulu.
4. Yonke inkqubo yokusebenza ilawulwa yi-PLC, ukusika kunye nokufumba kuyazenzekela.
5. Inesixhobo sokucoca inkunkuma emaphethelweni ngokuzenzekelayo.
6. Lo matshini ufuna abasebenzi aba-2 kuphela, ungagcina iindleko zabasebenzi.
7. Le nkqubo yabona uthuli iqokeleleke kakhulu, iya kuqokelela lonke uthuli lomatshini, kwaye uthuli luthathe ngamandla.
Ngokuzenzekelayo ukusika okuphezulu kokucheba umda
Egqithileyo Umgca wokukhangela we-8ft & 9ft
Okulandelayo: isixhobo sokusila imela